Ny ora fitsinjarana ny arsiva - Fanisana ny fanjakana
Fanahy any Kalifornia - Ny loza ateraky ny loza
Fanahy any Kalifornia - Matokia ny reninao
Amin'ny tahotra, tonga ny tahotra. Ary miaraka amin'ny tahotra, tonga ny fotoana hifehezana.
Karakarao ny fiainam-panahy.
Luz de Maria - Fantaro ireo famantarana ny vanim-potoana!
Tohero ny “onjan-kevitra”…
Fanahy any Kalifornia - Ny ora hisian'ny alahelo lehibe
Ny Fiangonana dia natao tahaka ny Zanako, tao anatin'ny hainy sy ny fialany…
Vavinay: miomàna (Pt 1)
Izao no lazainay amin'ny Lady anay izao: “Aza mitodika any aoriana. Aleo amin'izao vanim-potoana izao. Manantena ny fandresenao ... ary miomàna miaraka amiko. ”
Fizarana 6: Fr. Michel Rodrigue - Matio 24 ao amin'ny Baiboly miteny amin'ny androntsika